I-Filomena nokuwa kweqhwa eSpain 2021: izimbangela nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISpain iye yahlaselwa yisiphepho Filomena ukuthi ilayishwe imimoya enomswakama evela eningizimu nokuthi ihlangabezane nongqimba lomoya obandayo osuswe ezindaweni ezihlala e-arctic. Ukungqubuzana kwenqwaba yomoya kudale ukuwa kweqhwa emlandweni eNhlonhlweni Yase-Iberia.
Kulesi sihloko sizokutshela konke ngokufingqiwe ngokubikezela, izimbangela nemiphumela yesiphepho i-Filomena.
1 Izibikezelo zesiphepho Filomena
2 Ukuwa kweqhwa nesithwathwa
3 Izimbangela zesiphepho Filomena
Izibikezelo zesiphepho Filomena
Iziphuphutheki zesimo sezulu sezazi ngaphambilini phambilini ukunyakaza kwenqwaba yomoya eyayivela eningizimu nasenyakatho. Lapho inani elikhulu lomoya owomile nelibandayo lihlangana nomoya ofudumele nonomswakama, isiphepho senziwa ngomehluko phakathi kwengcindezi. Ukwehla kwengcindezi kudale ukuwa kweqhwa okumangalisayo kuyo yonke inhlonhlo. Iqhwa liwele ezindaweni ezinokuphakama okuphansi kakhulu lapho imvamisa kungekho imvula enjalo. Kusukela manje kuqhubeke futhi kunezinsuku ezithile eza nengaphambili elisha le-polar elinamazinga okushisa aphansi elenza iqhwa liqine futhi lihlale izinsuku.
Sibonile ngesikhathi sempelasonto iqhwa liwa njengaleyo engakaze ibonwe ngaphambili emlandweni waseSpain. Kusho iqhwa beze ukuvimba idolobha laseMadrid kanye nezinye izinhloko-dolobha zezifundazwe zishiya ingubo ebandayo esimboze cishe yonke indawo esenhlonhlweni. Lolu hlobo lwesiphepho seludale isimo esiphuthumayo ngenxa yokuntuleka kokuhamba ezindaweni ezisemadolobheni. Isibikezelo seState Meteorological Agency sikhombise ukuthi kunezimo ezilandelanayo eziguqule iPhilomena enesiphepho yaba isiphepho esihle.
Ukuwa kweqhwa nesithwathwa
Isiphepho esiseningizimu sigcwele imvula ebike yahlangabezana nayo ezinsukwini ezimbalwa futhi sesinike isikhathi lapho isibhakabhaka sicwebile kepha ngamazinga okushisa aphansi ngokwedlulele, akuwona umthelela owenza imvula ingaphambili ime, kunalokho, kungumcimbi ongaphandle kwesiphepho. Lesi simo somkhathi sixhumene ngokuphelele nesiphepho iFilomena ukuze sikwazi ukuguqula ISpain endaweni eneqhwa isikhashana. Ngenxa yalezi zimo zomkhathi kuyenzeka kugcinwe izimo ezidingekayo ukuze iqhwa likwazi ukubamba izinsuku.
Ngemuva kokuwa kweqhwa okungajwayelekile okwenzeke ekupheleni kwesikhathi esedlule, kuye kwafika igagasi elibandayo elimake amazinga okushisa angaphansi kwamadigri ayi-10 ezindaweni eziningi. EMadrid amanani okushisa ayi -10 degrees afinyelelwe. Lawa magugu awazange abonwe kusukela ngoJanuwari 16, 1945 lapho amazinga okushisa efinyelela ku -11 degrees. Amakhaza asebusuku ashubile nemvelo ebandayo yasemini kukhuthaze ukuphikelela kwesembozo seqhwa neqhwa ezindaweni eziningi phakathi nesonto.
Futhi kunenani eliphelele lezinto ezenze ukuthi iqhwa lihlale isonto lonke. Ake sibone ukuthi yiziphi lezi zinto:
I-anticyclone ihudula imifula yesigodi esisenyakatho ibheke enhlonhlweni. Le anticyclone inesibopho sokushiya isibhakabhaka sicwebile, umoya ucishe wehliswa ngokuphelele kanye nemvelo ebandayo yasemini ngamazinga okushisa asondela ku-0 degrees.
Isikhathi eside sobusuku besiteshi. Njengoba sazi, ubusuku basebusika bude kunehlobo futhi kuthambekele ekubeni namazinga okushisa aphansi isikhathi eside ngenxa yokuntuleka kwemisebe yelanga. Ngalamazinga okushisa aphansi inhlabathi isipholile ngamandla amakhulu.
Iqhwa elisanda kuwa likhombisa ilanga. Ngenxa yokuthi iqhwa liyakwazi ukukhombisa ukukhanya kwelanga, livimbela umhlaba ukuthi ufudumale kalula futhi lithuthukise umphumela owaziwa njengomphumela wesiqandisi. Ngalesi sizathu, imiphumela yeqhwa elethwe yisiphepho iFilomena izozwakala kuze kube cishe maphakathi noma ngasekupheleni kukaJanuwari.
Izimbangela zesiphepho Filomena
Ake sibone ukuthi yiziphi izizathu zalokhu kuwa okukhulu kweqhwa. Kumele sazi ukuthi isiphepho akubona bodwa esibhekele konke okwenzekile, okungenani hhayi kuphela. IFilomena kube yisiphepho esiseGulf of Cádiz esishaye umoya onomswakama ubheke enhlonhlweni. Iphambi kokuvame ukudala izinhlobo ezahlukahlukene zemvula eningi eningizimu nasempumalanga. Okungabonakala kakhulu ngezimvula ezinamandla eMalaga lapho imifula igcwale khona futhi yadala ukulahleka kwemiphefumulo yabantu.
Okwenzekile ngalesi sikhathi ukuthi iFilomena ihehe umswakama osuka eningizimu kanye ne-anticyclone esuka e-Atlantic iya e-United Kingdom ebilokhu ifaka umoya obandayo ezweni lethu isonto lonke. Lapho umoya obandayo uhlangabezane nenhlabathi enezinga lokushisa eliphansi elisendleleni yawo, iphendule izimvula isiphepho ezihambe nazo zaba yiqhwa. Eminye yemibuzo ekhiqizwa ochwepheshe bezimo zezulu ukuthi ngabe konke lokhu kuhlobene nokushintsha kwesimo sezulu. Abaningi bayazibuza ukuthi kungaba yini lokhu kubanda uma iplanethi ifudumala.
Kufanele uqonde ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkimbinkimbi impela. Yize umkhuba ukwengeza amazinga okushisa aphakathi komhlaba wonke, isimo sezulu asiphenduli ngendlela eqondile. Lokho wukuthi, umkhuba wesikhathi eside ezindaweni ezinkulu zezwe lapho izinga lokushisa lizokwenyuka. Siyazi ukuthi umkhathi womhlaba uyafudumala futhi kuyiqiniso lesayensi eliqinisekisiwe. Konke lokhu kungenisa amandla amaningi ohlelweni olushukumisayo ngokuphelele futhi amandla alo ensalela abangele isimo esingalindelekile futhi esinamandla amaningi okubanga imiphumela yendawo enamandla kakhulu.
Ngasikhathi sinye, njengoba amazinga okushisa aphakathi komhlaba ekhuphuka, okubizwa ngokuthi yi-polar jet kuyashintshwa. Kungumsinga womoya owenzeka ku-stratosphere futhi osiza ukuhlukanisa izindawo ezibandayo nezipholile. Eminyakeni yamuva nje, lo mgoqo uyashintsha futhi sizobona ukuphazamiseka kwemimoya yomoya yase-arctic endaweni yezindawo yeNhlonhlo Yase-Iberia.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nesiphepho i-Filomena nezimpawu zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-Filomena nokuwa kweqhwa eSpain 2021